24 qof ayaa ku geeriyoodey dab ka kacay Iskoool ku yalaa dalka Malaysiya • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / 24 qof ayaa ku geeriyoodey dab ka kacay Iskoool ku yalaa dalka Malaysiya
24 qof ayaa ku geeriyoodey dab ka kacay Iskoool ku yalaa dalka Malaysiya
Ugu yaraan 24 qof ayaa ku geeriyooday dab ka kacay Iskool, kuwa geeriyoodey ayaa u badan wiilal yaryar oo iskoolka ardey ka ahaa. Iskoolka ayaa ahaa nooca loo yaqaan Madarisada waxaana lagu bartaa diinta Islaamka.
Madarisada dabku ka kacay oo ahayd nooca jiifka leh ayaa ku taaley caasimadda dalka Malaysia ee Kuala Lumbur.
Dhismaha dabku qabsadey ayaa ahaa laba dabaq, waxaana uu dabku kacay subaxnimadii hore ee Khamiista xiliga dalka Malaysiya, markaas oo caruurta badankood ay hurdeen, sida laga soo xiganayo hay’adda ka shaqeysa badaadinta ee dalka Malaysiya.
– Waxaan maqley qaylo, waxaan u qaatey in caruurta ay dhexdooda isku buuqeen, waxaan furey daaqadda gurigeyga, waxaana arkey iskoolka oo gubanaya. Waxay ku dhawaaqayeen na caawiya, laakiin aniga waxba uma qaban karin sidaas waxaa warbaahinta u sheegtey Norhayati Abdul Halim, oo deganayd guri Iskoolka gubtey ka soo horjeeda.
Warbaahinta gudaha ayaa muujineysa sawirada Iskoolka oo gubanaya oo qiiq ka baxayo.
Madaxa Booliska Kuala Lumbur Amar Singh ayaa sheegay in ay adkeyd fursadda ay ku baxsan karaan caruurtu maadaama, halka ay ka degi karaan ay ahayd daaqadaha, waxaana dabku ka yimid dhanka daaqadaha, wuxuu sheegay in da’da caruurtan ay u dhexeysey 13 ilamaa iyo 17, waxaana ilaa hadda la xaqiijiyey dhimashada 22 ardey iyo laba kamid ah shaqaalihii Iskoolka, taas oo ilaa hadda tirada guud ka dheigeysa 24 qof.
Qaar kamid ah ardeydii ka soo badbaadey dabka ayaa Isbitaalka loo qaadey waxaana xaaladoodu ay adag tahay lix kamid ah.
Boolisku waxay sheegayaan in Iskoolkan uu ahaa mid aan haysan wax oggolaansha ah in halkaas wax lagu baran karo.